कोरोनाविरुद्ध लड्न सक्ने तागती खाना यी हुन् ! « Ok Janata Newsportal
कोरोनाविरुद्ध लड्न सक्ने तागती खाना यी हुन् !
काठमाडौं । रगतमा डब्लुबिसीको संख्या कम हुँदा शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हुन्छ । शरीरलाई छिटै रोगले आक्रमण गर्नसक्छ । रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन शरीरमा डब्लुबिसीको मात्रा पर्याप्त राख्नुपर्छ । त्यसका लागि लसुन, अदुवा, बदाम, बेसार र अमिला फलफूल खानु उपयुक्त हुन्छ ।
खानामा दैनिक लसुन र अदुवाको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । यी दुवैमा डब्लुबिसी अर्थात् शरीरको रोग–प्रतिरोधक क्षमता बढाउने तत्व हुन्छ । अदुवाले शरीरमा इन्फ्लेमेसन घटाउन पनि सघाउँछ ।
बदाम प्रोटिन र मिनरल्सको राम्रो स्रोत हो । दैनिक ८–१० दाना बदाम खानाले प्रतिरक्षा प्रणाली बजबुत राख्न मद्दत पुग्छ । तरकारीमा बेसारको प्रयोग रंग र स्वादका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बेसारले हामीलाई ओस्टियोपोरोसिस (हड्डीको कमजोरी), ब्लड प्रेसरजस्ता विभिन्न रोगबाट बचाउँछ ।